यस्तो डर*लाग्दो घ*टना म*र्न बा’ध्य बनाएको भन्दै आ’त्म ह*त्या गरे । बाध्य बनाउने को हुन प्रकाश बस्नेत | Public 24Khabar
Home News यस्तो डर*लाग्दो घ*टना म*र्न बा’ध्य बनाएको भन्दै आ’त्म ह*त्या गरे । बाध्य...
यस्तो डर*लाग्दो घ*टना म*र्न बा’ध्य बनाएको भन्दै आ’त्म ह*त्या गरे । बाध्य बनाउने को हुन प्रकाश बस्नेत
यस्तो डर*लाग्दो घ*टना म*र्न बाध्य बनाएको भन्दै आत्म ह*त्या गरे । बाध्य बनाउने को हुन प्रकाश बस्नेत
इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्यले राजदूतको जिम्मेवारी पाएर इजरायलमा गएदेखि नै रोजगारी खुलाउन पहल गर्दै आएकी थिइन्। उनले गत असोजमा इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीसँग सरकारीस्तरमा नेपाली श्रमिक ल्याउनेगरी सहमति गरेकी थिइन्।
त्यतिबेला पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा इजरायल रोजगार सुरु भए पनि चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा असफल भएको थियो। इजरायलबाट एकाएक माग आउन छाडेपछि छानिएका कामदारसमेत जान पाएका थिएनन्। अब पूर्णरूपमा सफल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको जनाइएको छ।
सरकारले सन् २०१५ मा इजरायलमा केयर गिभरका लागि एक सय १९ जना छानेको थियो। इजरायलले माग नपठाएपछि छानिएका ४१ जना इजरायल जान पाएका थिएनन्। इजरायलमा ठूलो संख्यामा केयर गिभरको माग रहे पनि त्यतिबेला इजरायली सरकारले माग संकलनका लागि नियुक्त गरेका एजेन्टले नेपालका म्यानपावरको प्रलोभनमा परेर माग पठाउन नसकेको बताइन्छ। इजरायल सरकारले त्यहाँ चारजना एजेन्टलाई कामदारको माग संकलन गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
इजरायल जान (हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षणसहित) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नहुने भएकाले इजरायल रोजगारप्रति कामदार आकर्षित छन्। इजरायलमा केयर गिभरले वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नुपर्छ ।
Previous articleइन्डियन दुतावासको यस्तो पत्र थुक्क, यस्ता का’यर पनि हाम्रा नेता ? अनि इन्डिया हाम्रो मित्र राष्ट्र?
Next articleसबिता माताले गरिन् रबिबारे ड*रलाग्दो भबि”ष्यबाणी, प्रचण्डको ननभेज आ न्दोलनबारे भित्री खु* लाशा ।